चिकित्सक भन्छन : 'दोस्रो लहरको संक्रमण बढी हानिकारक, पहिलाभन्दा धेरै छिटो फैलिरहेको छ ' - Demo Khabar
भारतमा नयाँ कोरोना भाइरस
चिकित्सक भन्छन : 'दोस्रो लहरको संक्रमण बढी हानिकारक, पहिलाभन्दा धेरै छिटो फैलिरहेको छ '
काठमाडौं, चैत । भारतमा नयाँ कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पहिलाभन्दा बढी हानिकारक रहेको चिकित्सकले बताइएका छन् । चिकित्सकका अनुसार पछिल्लो केही दिनदेखि बढ्दै गएको सङ्क्रमितको सङ्ख्याबाट सो कुुरा पुष्टि हुने बताउँछन् । तर, चिकित्सकले यसको पछाडि अन्य धेरै कारण पनि देखाएका छन् ।
भारतस्थित लोकनायक अस्पतालका एमडी डा. सुरेशकुमारका अनुसार यस पटक कोरोनाबाट सङ्क्रमित हुनेमा अधिकतम् युवा, बच्चा र गर्भवती महिला छन् ।
डा. सुरेशले नयाँ कोरोना भाइरस पहिलाभन्दा धेरै छिटो फैलिरहेको बताए । गत हप्ता २० सङ्क्रमित अस्पतात भर्ना भएको मा अहिले यो सङ्ख्या १७० पुगेको छ भने अस्पतालमा श्ययाको सङ्ख्याको माग बढ्दै गएको छ ।
त्यसो त मुम्बईमा दोस्रो लहरका सङ्क्रमितभन्दा ८० प्रशितभन्दा बढी बिना लक्षणका छन् । हार्ट केयर फाउण्डेशन अफ इंडिया एण्ड कन्फेडेरेसन मेडिकल एसोसिएसन अफ एशियाका अध्यक्ष डा. केके अग्रवालका अनुसार महिला र बच्चामा कोरोनाका लक्षण कम देखिएको छ ।
यसका लागि उनीहरु सावधान हुनु आवश्यक छ । त्यसो त दिल्लीमा विगत केही दिनदेखि कोरोना सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा ५ हजार १ सय मा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको आजतकले जनाएको छ । नोभेम्बर २०२० पछि यो उच्च हो भने दिल्लीमा राति कर्फ्यू लगाइएको छ ।
पछिल्लो केही दिनदेखि दिल्लीमा हरेक दिन तीन हजारभन्दा बढी केस देखिएको छ । यो सङ्ख्या तीन चार हजारको बीचमा रहेको थियो । तर विगतका दिनमा यो संख्या फेरि पाँच हजारभन्दा बढी देखिएको छ । यद्यपि मंगलबार दिल्लीमा एक लाखभन्दा बढी परीक्षण गरिएको थियो । एजेन्सी ।
बुधवार, चैत्र २५ २०७७०८:४४:२९
चितवन : 'कोरोना भाइरसका कारण एक महिलाको मृत्यु'